०७७ साउन ०८ गते बिहिबार ई.सं. २०२० जुलाई २३ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Horoscop/०७७ साउन ०८ गते बिहिबार ई.सं. २०२० जुलाई २३ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
०७७ साउन ०८ गते बिहिबार ई.सं. २०२० जुलाई २३ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
मिति २०७७ साल साउन ८ गते बिहिबार तथा ई.सं. २०२० जुलाई २३ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य यस्तो रहेकाे छ । राशीफल यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।
मेष राशी – भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ । रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन् । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले वादविवादमा परिने सम्भावना छ।
वृष राशी – धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ । मङ्गलमय कृत्य सम्पादन गर्ने समय छ । आर्थिक उन्नति हुने छ। नेतृत्व गर्ने र आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सफलता पनि हात लाग्ने छ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ।
मिथुन राशी – बेलामा होश नपुग्नाले खर्च मात्र हुनेछ । आफन्तबाट टाढिनुपर्ला ।सिर्जनशील क्षेत्रमा मन जाने छ। र व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ। लाभदायक यात्रा हुनेछ। मन प्रशन्न रहला। अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला।
कर्कट राशी – धनसम्पति जोड्ने योग छ। मित्रजनसँग भेट हुने छ। उल्लासमय दिन रहने छ।साझेदारी काममा उल्झन आउनेछ। बन्न लागेको काम विग्रिनेछ।हडबडी गर्दा काम बीचमा काम रोकिन सक्छ।
सिंह राशी – पैसा कमाउने अवसर प्राप्त होला। आफन्तबाट सहयोग हासिल हुने छ।महत्वपूर्ण कामको थालनी हुनेछ। लक्ष्मी प्रसन्न हुने योगछ। सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ।
कन्या राशी – स्वास्थ्य समस्या अन्त्य हुने छ। मित्रहरूसँग भेट हो।
तुला राशी – जागिरमा बढुवाको योग छ। आम्दानी बढ्ने छ। आफन्तबाट सहयोग पाइने छ।पैसा खर्च सोचेर मात्रै गर्नु होला। कर्मयोगले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ।
वृश्चिक राशी – विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने भविष्यका लागि दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। सामाजिक नेतृत्व हातलागी हुन सक्छ।आकस्मिक धन लाभ हुने योग छ।
धनु राशी – खोजी गर्दा आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। यात्राको पनि योग छ। दिन रमाइलोसँग बित्ने छ। यात्राको योग छ। परिवारसँग भेटघाट होला। दिन रमाइलो गरी बित्ने छ।
मकर राशी – दिन उल्लासमय हुने छ। काममा मन जाने छ। तर आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्लान्। परिश्रम परे पनि कम प्रतिफलमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति रहला।
कुम्भ राशी – अध्ययनको क्षेत्रमा सफलता हासिल होला। नयाँ कार्य प्रारम्भ होला। धनसम्पति हात पर्ने छ। वैदेशिक यात्रा योग पनि छ।अध्ययन अध्यापकको क्षेत्रमा सफलता हासिल हुने छ।
मीन राशी – धेरै कामको दायित्व लिनाले बढी परिश्रम गर्नुपर्ला। तापनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने मौका छ।धन खर्च भएपनि मन प्रफुल्ल रहने छ। दिन राम्रो छ।
आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस दैनिक राशिफल । फोटो छोएर दर्शन गर्नुहोस् सुभ फल मिल्नेछ ।
माता मनकामना माईले सबैको मनोकामना पूरा गरून् , आज असोज २४ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस !